खेम भण्डारीलाई किन एक रुपैयाँ जरिवाना तिराएर एक घण्टा कैद गरियो? के छ ८४ पेजको अदालतको फैसलामा? – MySansar
निर्मला प्रकरणमा ट्विस्ट एन्ड टर्न गराउने कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारी जिल्ला अदालतले तोकेको एक घण्टा कैद सजाय भुक्तानका लागि कारागार गएका छन्। उनले अदालतले तोके अनुसारको एक रुपैयाँ जरिवाना पनि तिरे। सो जरिवाना नतिरेको भए कैद सजाय बढ्न सक्थ्यो। तर उनले जरिवाना तिरेको भएर एक घण्टामात्रै कैद सजाय गरिएको हो।
एक घण्टा कैद हुनुअघि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै खेम भण्डारीले अदालतको फैसलाको सम्मान गरेको बताए। ‘एक रुपैयाँ जरिवाना मैले तिरेको छु र एक घण्टा जेल बस्न गइरहेको छु’, उनले भने, ‘त्यसपछि म आएर यसलाई म न्याय परिषदमा लैजान्छु। त्यो मिसिलको भाषा तपाईँहरुले देख्नुभो, त्यस्तो भाषा न्यायमूर्तिबाट प्रयोग हुन्छ भने लागिरहेको छैन।’
उनले अत्यन्त तानाशाही तरिकाको भाषा प्रयोग गरिएको आरोप लगाए। उनले न्यायपरिषद्मा जाने, पुनरावेदनमा जाने र सर्वोच्चमा जाने बताए।
यस्तो छ कैदी पुर्जी
अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै उनलाई ‘तुच्छ सजाय’का रुपमा एक रुपैयाँ जरिवाना र एक घण्टा जेलको सजाय न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले असार ३० गते सुनाएको हो। के हो त यो ‘तुच्छ सजाय’ भनेको? अदालतको व्याख्या पनि रोचक नै छ।
पहिलोपोस्टबाट विदा हुनुअघि #WhoKilledNirmala को शृङ्खला २६ मा सात दिन लगाएर निर्मला प्रकरणलाई ‘ट्विस्ट एन्ड टर्न’ गराउने ती शक्तिशाली व्यक्ति शीर्षकमा ५ हजार चानचुन शब्दमा एउटा रिपोर्ट तयार पारेको थिएँ। छुटाउनु भएको भए यहाँ क्लिक गरी पढ्न सक्नुहुन्छ। उनले जे भन्यो राज्यले त्यही गर्न बाध्य कसरी भयो? आन्दोलनकारी मात्र हैन, राजधानीका मिडियालाई समेत आफ्नो एजेन्डामा हिँडाउन सफल कसरी भयो? यो विषयमा विस्तृत लेखेको थिएँ।
अदालतले गरेको फैसलामा यसलाई पनि Obiter fact का रुपमा लिएको देख्दा खुसी लाग्यो। Obiter fact भनेको observation मा लिनु हो acknowledge गरेको छु भन्नु हो। तर यसलाइ एउटै सत्यको रुपमा वा authentic source वा प्रमाणको रुप ग्रहण गरिएको हैन। यसको अर्थ हाम्रो रिपोर्टलाई अब्जर्भ गरी further issue केलाउनु हो।
८४ पेज र २४० बूँदासहितको कडा भाषाको फैसलामा ‘तुच्छ सजाय’को अर्थ पनि दिइएको छ।
केबारे मुद्दा हो?
निर्मला प्रकरण साउन १० गते एक वर्ष पूरा हुन्छ। अहिलेसम्म अभियुक्त पहिचान गरी मुद्दा नचलाइए पनि यही प्रकरणसँग सम्बन्धित पाँच वटा मुद्दा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा चल्यो। एउटा मुद्दा अधिकारकर्मीहरुको पहलमा दायर भएको एसपी विष्टसहित ८ प्रहरी विरुद्ध प्रमाण नष्ट र यातनाको कसुरसँग सम्बन्धित छ।
यस्तो छ तीन आदेश
क. प्रस्तुत फैसलामा माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेखन गरिएका मानहानीकारक सामाग्रीहरु आजका मितिले ७ दिन भित्र सामाजिक सञ्जालबाट तथा पत्रिकाको अनलाइनबाट हटाउन निर्देश गरिएको छ।
ख. आजैको मितिदेखि बार तथा बारका पदाधिकारीका विरुद्धमा अनर्गल विषयवस्तुहरू पोष्ट नगर्न तथा त्यसमा न्यायिक काम कारवाहीहरू नजोड्न पत्रकार खेम भण्डारीलाई आदेश जारी गरिएको छ। कुनै कारण रहेको भए कानून बमोजिम मुद्दा दायर गरी न्याय प्राप्त गर्ने हंक निज पत्रकार खेम भण्डारीको सुरक्षित नै रहेको छ।
ग. पत्रकार खेम भण्डारीको पत्रिका मानसखण्ड तथा निजको सामाजिक सञ्जालमा न्यायालयको अवहेलनाका सम्वन्धमा आजका मितिले ३ दिन भित्र बिना शर्त आत्मालोचना गर्न निर्देश गरिएको छ। चाहेमा तत्त सम्वन्धि आलेख प्रकाशन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ।
अदालतले दिएको तीन दिनको म्याद साउन २ गते सकिन्छ।
आदेश पालना नगरे यस्तो ‘तुच्छ सजाय’
उल्लिखित आदेशको पालना नगरेमा वा आदेशको पालना गर्दा पनि कसैप्रति आक्षेप लगाउने होच्याउने वा अवमानजनक शब्द एवम वाक्यांशको प्रयोग गरेमा वा न्यायिक अवहेलना हुने गरि व्यङ्ग्य प्रस्तुत गरेमा निज पत्रकार खेम भण्डारीलाई देहाय बमोजिमको तपसिल खण्डमा लेखिएका रितसँग तुच्छ सजाय (Mean/Damn punishment) सजाय गर्नु ।
क. १ घण्टा कैद र रू १ जरिवाना गर्नु ।
ख. सो सजाय गरिएको कुरा यस अदालतको सूचना पाटिमा टाँस गर्नु!
१ रुपैयाँ नतिरे २ दिन कैद
फैसलाको तपसिलमा उल्लेख भए अनुसार १ घण्टाको कैद भनेको पूरै १ घण्टा नै बस्नुपर्ने हुन्छ। व्यवस्थापकीय कार्यमा लाग्ने समय अवधि, कारागार भित्र र बाहिर गराउँदा लाने समय अवधि कटाएर १ घण्टा कैद गर्नु भनिएको छ।
जरिवाना वापत १ रुपैयाँ नबुझाए के हुन्छ त? नबुझाए एक दिन कैद भनिएको छ। त्यतिमात्र हैन १ दिन कैद गर्नुपर्ने अवस्था आएमा १ घण्टा कैदलाई रुपान्तरण गरी २ दिन कैद गराउन पनि फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलाको पूर्ण पाठ वेबसाइटमा अपलोड गरिएको छ। हेर्नुस् त्यहाँबाट डाउनलोड गरिएको प्रति
1 thought on “खेम भण्डारीलाई किन एक रुपैयाँ जरिवाना तिराएर एक घण्टा कैद गरियो? के छ ८४ पेजको अदालतको फैसलामा?”